पुष्पकमल प्रस्ट, अरु अस्पष्ट « paniphoto
« मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ? एसएलसीको रिजल्ट सार्वजनिक, नतिजा हेर्नुहोस् »	पुष्पकमल प्रस्ट, अरु अस्पष्ट
By -paniphoto- on Wednesday June 13, 2012	एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसै साता तामाङ मोर्चाको कार्यक्रममा गरेको भाषण सुनेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेता झस्किएका छन् । उनले सत्ता कांग्रेस-एमालेको मात्रै पेवा वा बिर्ता नभएको भन्दै सिंगै सेना र हतियार माओवादीको भइसकेको र एक किसिमले राज्य कब्जा भइसकेको बताएपछि विपक्षी नेताहरु झस्कनु स्वभाविककै हो ।
नेकपा माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । जनयुद्धताका माओवादी निशानामा कांग्रेस र एमालेका नेता-कार्यकर्ता पर्दै आएका थिए । संसदीय व्यवस्था र कांग्रेस, एमालेप्रति माओवादीको के कस्तो नीति थियो भन्ने बुझ्न माओवादी पार्टीको विगतको साहित्य एवम् ‘प्रचण्डका संकलित रचना’ हेरे पुग्छ । साथै, सत्ता कब्जासँग सम्बन्धी उनको रणनीति बुझ्न संविधानसभा चुनावपुर्व नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको शक्तिखोर शिविरको भाषण सुने पर्याप्त हुन्छ । प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिमा प्रस्ट देखिन्छन् ।
प्रचण्ड आफ्नो योजना र नीतिमा स्पष्ट भएपनि आफैंमा अस्पष्ट र रनभुल्लमा पर्नेहरु चाँही नेपाली कांग्रेस र एमाले हुन् । ०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा यो आतंक ३ महिनामा समाप्त हुन्छ भनेर बर्षौसम्म दाबी गर्ने विपक्षी यीनै हुन् । उनीहरुले त्यसबेला माओवादीलाई सहिरुपमा बुझ्न सकेको भए यसो भनिसकेपछि फेरि उसैसँग दिल्लीमा वार्ता गरेर त्यत्रो सिट दिई दिई संसदमा किन ल्याइयो ? एमाले नेता झलनाथ खनाल र प्रेमसिंह धामीको नेतृत्वमा त्यतिबेलै माओवादी समस्याबारे अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । ०५८ सालपछि भएका वार्तामा प्रारम्भमा संविधानसभा एजेन्डामा स्वीकार नभएपछि वार्ता भंग भयो । फेरि रक्तपात मच्चिएपछि सहमति भयो । संविधानसभाको चुनावपछि पनि एमाले र कांग्रेस माओवादीलाई हे्र्ने सवालमा अस्पष्ट रहदै आएका छन् । संविधानसभाको म्याद सकिनु १५ दिनअघि कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र एमालेका इश्वर पोखरेल किन भट्टराई सरकारमा मन्त्री बन्न पुगे ? यो उनीहरुको अस्पष्टता र माओवादीको प्रयोगवादी नीतिको सान्दार प्रमाण हो ।
सत्ताइतरका दलहरु यतिबेला माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न लागेको बताइरहेका छन् । तर, सत्ता कब्जा गर्न लागेको मात्रै हैन, माओवादीले झन्डै सत्ता कब्जा गरिनै सकेको छ । कांग्रेस र एमालेहरु सडकमा छन् । सरकार परिवर्तनका लागि सदन छैन । देशमा संविधान छैन । भएको अन्तरिम संविधान अनुसार पनि देश चलेको छैन । सरकारको आयु कहिलेसम्म भन्ने निश्चित छैन । निर्वाचनको भिति तोकिएको त छ, तर निर्वाचन हुने अवस्था छैन । एउटा न्यायधीशलाई अज्ञातसमूहले ढालेर सबै न्यायलयलाई त्राहिमाम थपिएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले पनि बाबुराम सरकारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने संकेत छैन । सरकार, प्रहरी र सेना आफ्नो पक्षमा देखिएपछि प्रचण्डले सत्ता आफ्नो हातमा आइसकेको बताउँनु कुनै अनौठो होइन । चुनाव घोषणा गरिए पनि हुन नसक्ने अवस्थामा अब प्रचण्डले डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्रीका रुपमा अनिश्चित कालसम्म सत्ता चलाए भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सत्ता र सरकारको प्रश्नलाई राजनीतिको केन्द्रविन्दु मान्दै आएका विपक्षीहरुसामु माओवादीले कब्जा गरेको सत्ता फिर्ता लिनका लागि अब तीनवटा विकल्प छन् : एक, सहमतिका आधारमा सहमतिको सरकार बनाउँने, दोस्रो, सडक आन्दोलनबाटै सरकार ढाल्ने, र तेस्रो, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर बाबुरामलाई अपदस्थ गराउँने ।
यी विकल्प मध्ये सहमितमा आउँनका लागि माओवादीले दबाब महसुस गरेको छैन । प्रचण्डको उग्र भाषणले यही कुरा सिद्ध गर्छ कि सहमतिका बाबजुद कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व नसुम्पन उनी अझै दत्तचित्त छन् । विजयकुमार गच्छेदारले पनि प्रचण्डलाई यही विद्या दिएका छन् । आफ्नै ब्रम्हले सहमतिमा आउन तयार नभएपछि बिनादबाब माओवादीले सहमतिइ सरकारको ढोका खोल्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । दोस्रो विकल्पका रुपमा दलहरुले सडक आन्दोलन चर्काएर माओवादीलाई गलाउँने सम्भावना पनि देखिन्द्द । मनसुन सुरु हुने भएकाले तिहारअघिसम्म ठुलो आन्दोलन उठ्ने स्थिती छैन ।
साभार : जनआश्था साप्ताहिक – २०६९ जेठ ३१
« मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ? एसएलसीको रिजल्ट सार्वजनिक, नतिजा हेर्नुहोस् »	4 comments to पुष्पकमल प्रस्ट, अरु अस्पष्ट
· जवाफ दिनुहोस्	प्रचण्ड नेपालको बुझिनसक्नु नेता हो /उसलाई कसैले बुझ्न सक्दैन/
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	मोहन बोगटी
· जवाफ दिनुहोस्	प्रचण्डले जे नाटक गरेपनि र बाहिर जे भने पनि उसले आफ्नो लक्ष्य त्यागेको छैन / अब प्रचण्डले कम्निस्ट शासन ल्याउँन धेरै समय छैन/
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	प्रताप लिम्बु
· जवाफ दिनुहोस्	प्रचण्ड भनेका छेपारो जस्तो हुन् /तर यस्तो छेपारो जो रंग बदल्छ र घाँसमा पनि आफ्नै रंगको पोतो लगाउँछ/
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Dayaman Bajracharya
· जवाफ दिनुहोस्	घुमाए सबैलाई प्रचण्डले /फिनफिनी नै घुमाए /अहिले यो वैद्यसँग झगडा परेको जस्तो देखिएको पनि नाटक हो/ अब झन् धेरै तरिका अपनाउँदैछन्/ प्रचण्ड र बाबुरामले सत्ता कब्जा गर्छन् यदि केही गरि नसके वैद्य पक्षको पार्टीमा फेरि सबै जना आउँछन्/ यीनीहरुको मास्टर प्लान हो सबै/ तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने/
नत्र अहिले वैद्यले निउ खोज्नुको कारण के हो, कसैले भन्न सक्छ ? बैद्य जसरी नि सत्ता कबज्जा गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे हो/ अहिले नेपालको राजनीति वैद्यले भने जस्तै भइरहेको छ/ यस्तो बेलामा निउ खोजे जस्तो मात्रै गरेको हो /डेन्जर रणनीति बन्दै छ /अरु लाटाहरु केही न केही /
यही Category बाटयुक्रेनमा के भइरहेको छ ?के फरक छ पश्चिमा र हामी बिचमा ? तस्विर हेर्नुहोस्विद्यार्थीको बाँदर प्रवृति – तस्विर हेर्नुहोस्फिल्मीपात्रका अनौठा रोगहरुयस्ता मान्छे पनि हुँदा रहेछन्, भिडियो हेर्नुस् नजनावरहरुको झगडाका रमाइला तस्विरहरुजनावरहरुको झगडाका रमाइला तस्विरहरु – १साना केटा गीत राम्रो गाउँदा रहेछन् (भिडियो हेर्नुस्)अचम्मका 3D पेन्टिङहरु !!नवरात्रिमा पूजा हुने नवदुर्गाहरु !Online Users6 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार